ikhaya AMAZIKO E-ASIAN FOOTBALL I-Park Ji Sung Ibali leNgcwaba yabantwana Plus Untold Biography Facts
Igqityelwe ukuvuselelwa kwi Disemba 28, 2018
LB unikeza iNqaku elipheleleyo le-football genius eyaziwa kakhulu ngeSiza; 'Iipaki ezintathu zeeLung'. I-Park yethu iSung Childhood Story I-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lokuzalwa kwakhe. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobomi, ubomi bentsapho / imvelaphi yokuBambisana noBomi kunye ne-OFF and ON-Pitch inyaniso engaziwayo ngaye. Ngaphandle kokunye u-ado, masiqale.
I-Park Ji Sung Ibali leBantwana leNgcaciso Plus Untold Biography Facts- Obomi bakwangoko
Park Ji-Sung wazalwa ngoFebruwari 25, 1981, eGoheung, eSouth Korea yiPark Sung-jong (uyise) kunye noJang Myung-ja (unina). Wakhulela kwisixeko saseSuwon.
I-Park Ji-sung yayithanda ukubona abadlali bebhola bebhola bedlala behlala kwiTV ngelixa esemntwana. Le yindlela ayenayo ngayo umdla umdlalo. Nangona kunjalo, kwakukho ingxaki. Wayemfutshane kakhulu kwaye uncinci. Oku wakubonayo njengomlinganiselo. Ngomnqweno wokulungisa iziganeko zakhe zomzimba, abazali bePaki babefanele bahambe imifuno ukuze bafumane unyana wabo onobunono bebhola ekhatywayo. Bamenza bamnxise amanzi okuxutywa ngamanzi kunye negazi lezondlo kunye nenkolelo yokuba oko kuya kumnceda akhule. Ngethamsanqa, incede.
I-Park Ji-sung yazithemba kwakhona kwakhona waza waqala ukudlala ibhola kwakhona. Wayeyidlala esikolweni sakhe saseprayimari kwaye wayedlala ngokukhuphisana. Akuzange kuthathe ixesha elide ngaphambi kokuba aqaphele njengenye yeenkwenkwezi ezincinci kwiSouth Korea. Emva kwesikolo esiphakeme, wabhalisa kwi-University of Myongji yaseMzantsi Korea.
I-Park Ji Sung Ibali leBantwana leNgcaciso Plus Untold Biography Facts-Ubomi Bentsapho
Igama likayise nguPark Sung-jong ngoxa unina igama linguJang Myung-ja. Bobabini abazali babambelela ndawonye ukuze babone unyana wabo ekhula ukuze azalisekise amaphupha akhe. Unina, u-Myung-ja wayecebile kunotata. Wayekwazi ukulawula i-factory ye-korea yensimbi eyaziwayo. Ngoku umhlala phantsi.
I-Park Ji Sung Ibali leBantwana leNgcaciso Plus Untold Biography Facts-Ulwalamano lobomi
Ipaki ngokuyininzi yayigcina ubomi bakhe bodwa ngaphandle kwenkcazo kwaye yamangalisa imidiya ngokumemezela umtshato wakhe oza kutsho kumbhali we-TV uMnuz Kim Min Ji kwinkomfa yakhe yomhlala-phantsi. Batshata ngo-27 Julayi 2014 eMzantsi Korea. Intombi yabo yazalwa ngoNovemba 2015.
Izidumi zikhukula isakhiwo njengoko umdlali webhola ekhatywayo Park Ji Sung kunye nesakuba ngumkhangisi weSBS wangaphambili Kim Min Ji babambe umtshato wabo ngoJulayi 27. Umtshato wenziwa kwiHellaton Grande Walkerhill Hotel eSeoul. Lo mbhiyozo wenziwa nguSBS Bae Sung Jae, kwaye ingoma yokubongozwa yayihlabelelwa ngummemezeli Kim Joo Woo.
Njengoko kulindelwe, uluhlu lwabatwendwe luquka inani leenkwenkwezi eziyaziwayo ezifana nomqeqeshi webhola Guus Hiddink, owamnceda uKorea ukuba afumane i-Top 4 ngexesha leNdebe yeHuman ye-2002, kunye neenkwenkwezi zaseManchester United Patrice Evra (umhlobo wakhe omkhulu eYurophu).
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iPark Ji Sung noKim Min Ji baphenduka kubantu abangaziwayo baya kubathandi be-2011, kwaye baye babesidlangalaleni malunga nolwalamano lwabo ku-2013.
I-Park Ji Sung Ibali leBantwana leNgcaciso Plus Untold Biography Facts-Imisebenzi Yobungcali
Ngo-5 Oktobha i-2014, kwaziswa ukuba iPaki yayiza kuthatha indima njenge-ambassador yehlabathi kuManchester United. Uye wathatha inxaxheba kwi-Asian Dream Cup isehlo sonyaka sothando kunye neqela elinelungelo "Park Ji-Sung kunye nabahlobo.
I-Park Ji Sung Ibali leBantwana leNgcaciso Plus Untold Biography Facts-Iindaba ezingabonakaliyo zobuhlobo bakhe obugqithise zonke izithintelo
Ummeli waseManchester United u-Patrice Evra noJi Sung Park bangabangane abakhulu. Hhayi nje kuphela kumgca kodwa ngakumbi ngokugqithiseleyo kwi-pitch, njengoko uEvra esoloko ethanda ukutyelela iPaki. Ukusebenzisana phakathi kwabo kuye kwasondeza isibini kunye, malunga nabazalwana. UVra ubiza uyise kaPaki, iPark Sung Jong, uPapa.
Ukuphila eNgilani, abadlali ababini baxhomekeka kakhulu kunokuba baxine ubunzima babo ndawonye. I-Park Sung Jong ngoku idibanisa amabali angabonakaliyo.
Xa iManchester United ibe nomdlalo phesheya indlu yethu iba yindawo yokuhlangana. Ngenxa yokuba ukupaka kubiza kwisikhululo sezindiza, abadlali abaningana baya ekhaya ukuze bakwazi ukukhwela kum ukuya kwisikhululo. I-Pat, i-Carlito, i-VDS, kunye ne-Berba ngaba abathengi abaqhelekileyo kunye no-Ji. Ndisoloko ndiba nexhala xa ndibaqhuba ngenxa yokuba ndihamba neqela lama-superstars kunye neendleko zabo ezidibeneyo zingaphezu kwezigidi ze-40 !! Ngako oko, kufuneka ndihlale ndiphaphekile kwaye ndize ndizame ukucinga ngokuphazamiseka! Kodwa u-Evra uhlala ecaleni kwam ngokukrakra kwakhe amahlaya avamile kwaye aphelisa nayiphi na inkxalabo. Xa siphumelele i-EPL, uEvra wayengowokuqala ukuza kwaye undigumbise kunye nomfazi kwaye athathe umfanekiso nathi. Kwakhona, uhlala ndibiza ubaba. Yiloo ndlela esondele ngayo, njengentsapho.
UVra ngumhlaba wamaFrentshi, kodwa empeleni uvela eSenegal. Wakhula ezitratweni zangasese zase-Les Ulis, indawo ehlala enezigulana. Nangona kunjalo, yayingumdlalo webhola owawuvimbela uEvra ukuba ahambe kuloo ndlela. Ndicinga ukuba u-Theirry Henry wayevela kuloo ndawo.
I-Evra nePark baneminyaka efanayo. U-Evra unentlalontle ngakumbi kuneJi, kodwa bobabini bangathethi baninzi kwaye bobabini bahamba phambili. Ingaba uRuud Van Nistelrooy wexesha elidlulileyo okanye u-Edwin Van der Sar, uninzi lwabahlobo bakaJe bavela phesheya, ngaphandle kweKok. Abadlali baseBrithani baxhomekeke kunye kunye nabadlali bezinye iintlanga badla ngokuqoqa kunye kunye nokuxhomekeka komnye nomnye.
I-Park Ji Sung Ibali leBantwana leNgcaciso Plus Untold Biography Facts-Ubuhlobo Oqhubekayo ...
Ipaki iyaqhubeka ... In ehlobo lase2007, ngexesha le-Asia Tour, uEvra wakwazi ukutyelela eKorea. Ngomhla ngaphambi komdlalo, weza kwindlu yethu eSuwon. E-Manchester, wayesoloko esicele ukuba ubuya kutyelela ikhaya lethu eKorea ukuba wayenalo ithuba. Ngoko ke, wathatha ithuba xa uManchester United efika eKorea ukuba eze kuthi tyelele. Akazange abukeke nje ngeenxa zonke kwendlu yethu, kodwa wandicela ukuba ndimthabatha e-nightclub eSeoul. Andizange ndibe kwi-nightclub ebomini bam kude kube ngumhla endikunike wona kwiimfuno zika-Evra.
U-Evra kwaye ndiqale ndidibana nabahlobo kodwa njengeentshaba e-2005. Baye baxabana kwi-16 kwi-Champions League, ndadlala i-PSV no-Evra badlala i-AS Monaco. Emilenzeni emibini, ndadlala ngakwesokudla kwimizila kunye ne-Evra idlala njengasekhohlo kwaye ngoko sobabini sasihlala ekulweni. Ekugqibeleni, i-PSV iphumelele kwimidlalo yomibini 1-0 kunye ne-2-0. Ngezinye iinkqubo uEvra ukhumbuza ngalo mdlalo. Wayegubungela "Ndandichukumisa ubusuku bonke ngawe kwaye ngoko andizange ndibe ngumhlobo nawe." "Ndibe nomsindo kuwe." Ngokumangalisa kukuba, mna no-Evra siyakhumbula loo mdlalo kakuhle. Ndiyakholwa ukuba yayiyiyo nto yokuba siba ngabahlobo abakhulu.
Xa u-Evra waqala ukubuyela ngoJanuwari ngo-2006, wayenenkinga yokulungelelanisa iqela. Ngaloo mihla, uMikael Silvestre noGabriel Heinze bamisa iindawo zabo phambi kwe-Evra kwaye kwakungekho ndawo i-Evra eya kuyo. Nanini na xa wayenethuba lokudlala, wenza iimpazamo kwaye wayihlawula indawo yakhe. Wayehlaselwa kangangokuthi ngezinye iinkhathi wayekhohliwe imisebenzi yakhe yokuzikhusela waza washiya ummakethi wakhe ukhululekile. Ngelishwa, wabizwa ngokuba "I-backback engabuyi" ngamacandelo athile e-Utd abalandeli. Ngelo xesha, kunene mna owaduduza uEvra waza wamnika ihlombe. Ndatshela uEvra ngezihlandlo ezinzima ndazifumana eNetherlands ndazama ukumnika ithemba lokuba wayeyifunayo.
Saba ngabahlobo abasondeleyo kunye noEvra xa ndifudukela ngasecaleni kwendlu yakhe ngoFebruwari 2007. Nanini na umfazi kaEvra, uPatricia (igama lokuqala likaEvra nguPatrice kunye negama lakhe lokuqala nguPatricia), uthatha abantwana bakhe ukuba batyelele izalamane zaseFransi, uEvra uza ekhaya kwaye ahlale njengokuba yindlu yakhe. Ngamanye amaxesha, undimema endlwini yakhe kwaye sichitha ixesha kunye. Ndicinga ukuba u-Evra ubuyisela njani ububele endimnike wona. Xa ndithe ndahlinzwa ngesikhumba sakhe sasekhohlo, ndiyakhumbula uEvra ebhala ukuba athole isigidimi esifanelekileyo. Xa ndandihlinzwa ngedolo lakhe lasekunene kwi-Spring ye-2007, u-Evra wanikezela injongo awayeyifumene nayo kwi-7-1 yokubetha amaRoma kum.
I-Park Ji Sung Ibali leBantwana leNgcaciso Plus Untold Biography Facts-Ukuqhubeka
Uyise kaEvra uhlala eDakar, eSenegal. U-Evra uthi, ngenxa yokuba uyise utshatile kaninzi, nanini na xa ebuyela emzini wakubo, kukho uVra apha, u-Evra apho no-Evra Evra yonke indawo. Uyise kaEvra uhlala eSenegal, kodwa wafika waya eManchester ngelinye ilanga. U-Evra wayevuyiswe kakhulu ngethemba lokudlala phambi koyise e-Old Trafford. Nangona kunjalo, uFerguson wanquma ukubeka uEvra kwibhentshi emva komdlalo, uEvra wayebuhlungu kakhulu. Waba nomsindo ngaphakathi kodwa xa efika ekhaya waqhuma. Wememeza waza waqala ukuphosa izinto phantsi. Kwakusobala ukuba wayefuna ukwenza uyise abe nekratshi. Ndakhangela uEvra ndacinga ukuba "ntoni na ukuba oko kwenzeka kum? Ndidla ngokufihla. Nangona kunjalo, ndiyazi ukuba wayedumale kakhulu xa ephosakele kwithuba lokudlala kwindawo ethile yokugqibela yesiC CL esinayo. Ngamanye amaxesha, ndiyathanda ukuba ndiza kubonakalisa ngakumbi iimvakalelo zanjengeEvra.
Ngonyaka othembekileyo, sathuthela endlwini Evra esetyenziselwe ukuhlala. Amabakala amathathu anamagumbi asixhenxe. U-Evra naye wahamba malunga nemizuzu ye-3-4 kude nathi. Xa ndiya kuqeqesho, mna no-Evra sihlala sihlanganyela ngemoto. Ngenye imini kuya kuba ndiqhuba kwaye ngomso u-Evra. Xa uqeqesho luphelile, bobabili maxa wambi siya kwindawo yokudlela yaseKorea ukuze sidle.
Uthando luka-Evra ngo-Utd lomelele. Wafumana isibonelelo esinokubaluleka kakhulu kwi-Inter Milan kodwa wabuyela ngokukhawuleza. Nanini na xa edlala umdlalo wevidiyo webhola lebhola kum, andikaze ndimbone ekhetha iqela ngaphandle kwe-Utd. Ngoku sisekupheleni kwe-CL kunye kwakhona. Kwiintsuku ezimbalwa ezedlule, uEvra wandixelela "Mhlobo, unyaka odlulileyo asizange sidlale kunye, kodwa ngeli xesha lenza oku kunye. Khumbula, ukuba nawuphi na umlinganiselo wethu, kufuneka sibhiyozele kunye. "
QHUBEKA: Siyabulela ukufunda i-Park Ji Sung Childhood Indaba kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke ingxelo yakho okanye uxhumane nathi!
Ibhola lebhola lebhola laseMzantsi Korea